Shiinaha Muhiimadda heerkulka iyo huurka ee digaag soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | HENGKO
Shaandheeyeyaashu Sintered daadata Birta
Ahama Steel Filter
Ahama Steel Filter cajalid
Ahama Steel Filter Tube
Ahama Steel Plate Filter
Koobabyada Makiinadaha Sheeg
Sinter ahama Steel Filter
Sinter Powder Birta Filter
Powder Sintered daadata Birta Filter Waxyaabaha
Sifee Naxaasta Dambe
Ahama Steel mesh Filter
Air iskaamiinto aammusiiye
Temp huurka Data Logger
Heerkulka Uumi sensor
Qoyaan sensor Housing
Kaarboon Kaarboon Carbonation Stone
Ogsijiin Beer Carbonation Stone
Xumbo Diffuser Air Stone
Golaha gaaska gaaska
Gas qalabka sensor Housing
Golaha Baaritaanka Gaaska Xasaasiga ah
Golaha Gaaska Shidaalka
qalab ka kooban
Muhiimadda heerkulka iyo huurka ee digaagga laga beero
Jiilaalku wuu imanayaa, waqooyiga iyo koonfurtu waxay galeen xilli qabow, kaliya ma ahan dadka qabow, digaaguna waxay noqon doonaan "qabow". Heerkulku waa mid ka mid ah arrimaha muhiimka ah ee hagaajin kara heerka badbaadada iyo heerka digaagga digaagga digaagga ee beerta digaagga, dhammaanteen waan ognahay in kaliya heerkulka saxda ah ee beedku ay ukunta kori karaan oo ugu dambayntii digaagga u dillaaci karaan. Iyo habka korinta digaagga yaryar, heerkulku aad ayuu u hooseeyaa, digaagdu waa u fududahay qabow iyo waxay keenaan shuban ama cudurro neefsashada ah, iyo digaagdu way isa soo wada urursan doonaan si ay u kululaadaan, u saameeyaan quudinta iyo howlaha. Sidaa darteed, beerta digaagga waa inay fiiro gaar ah u yeelato xakamaynta heerkulka.
La socodka heerkulka iyo xakamaynta guriga digaagga ：
Heerkulka maalinta koowaad ilaa labaad wuxuu ahaa 35 ℃ ilaa 34 ℃ biyo geliyaha iyo 25 ℃ ilaa 24 ℃ beerta digaagga.
Heerkulka kululeeyaha laga bilaabo 3 ilaa 7 maalmood jir wuxuu ahaa 34 ℃ ilaa 31 ℃, tan beeraha digaaguna waxay ahayd 24 ℃ ilaa 22 ℃.
Toddobaadkii labaad, heerkulka kulaylku wuxuu ahaa 31 ℃ ~ 29 ℃, heer kulka digaagguna wuxuu ahaa 22 ℃ ~ 21 ℃.
Toddobaadkii saddexaad, heerkul-kululeeyaha wuxuu ahaa 29 ℃ ~ 27 ℃, heer kulka digaagguna wuxuu ahaa 21 ℃ ~ 19 ℃.
Toddobaadkii afraad, heerkulka kulubku wuxuu ahaa 27 ℃ ~ 25 ℃, tan beerta digaaguna waxay ahayd 19 ℃ ~ 18 ℃.
Heerkulka koritaanka digaagga waa inuu ahaadaa mid xasilloon, ma beddeli karo inta u dhexeysa sare iyo hoose, wuxuu saameyn ku yeelan doonaa koritaanka digaagga.
Qoyaanka digaagga ayaa inta badan ka yimaada uumiga biyaha ee ka dhasha neefsashada digaagga, saameynta qoyaanka hawadu ay ku leeyihiin digaagga ayaa lagu daraa heerkulka. Heerkulka saxda ah, huurka badan ayaa saameyn yar ku leh nidaamka kuleylka ee jirka digaagga. Si kastaba ha noqotee marka heerkulku sarreeyo, jidhka digaagga ayaa inta badan ku tiirsan kala-baxa kuleylka uumi baxa, iyo huurka badan ee hawadu wuxuu ka hortagaa faafitaanka kuleylka uumi baxa digaagga, iyo kuleylka jirka way fududahay inuu ku uruuro jirka, xitaa wuxuu sameeyaa kor u kaca heerkulka jidhka, oo saameeya koritaanka iyo wax soo saarka ukunta wax ku oolnimada digaagga. Waxaa guud ahaan la aaminsan yahay in 40% -72% ay tahay huurka ku habboon digaagga. Heerkulka xadka sare ee dhigista digaagga ayaa hoos u dhacay iyadoo ay kordheen qoyaanka. Xogta tixraaca waa sida soo socota: heerkulka 28 ℃, RH 75% heerkulka 31 ℃, RH 50% heerkulka 33 ℃, RH 30%.
Waxaan u adeegsan karnaa dareeraha heerkulka iyo huurka si aan u ogaano xogta heerkulka iyo huurka ee digaagga, marka heerkulka iyo huurka uu aad u sarreeyo ama aad u hooseeyo, waxaa noo habboon inaan qaadno tallaabooyin waqtigooda ku habboon, sida furitaanka marawaxadda qiiqa hawo qaadista iyo qaboojinta ama qaadida talaabooyin waqtigeeda kuleyl ah. Wax soosaarka taxanaha gudbiyaha Hengko HENGKO® iyo huurka waxaa si gaar ah loogu talagalay la socodka heerkulka iyo huurka ee jawiga adag. Codsiyada caadiga ah waxaa ka mid ah jawiga gudaha ee xasilloon, kuleylka, hawo-qaboojinta hawo-qaadashada (HVAC), beeraha xoolaha, aqalka dhirta lagu koriyo, barkadaha dabaasha ee gudaha, iyo codsiyada banaanka. Guryaha baaritaanka dareeraha, marin hawo wanaagsan, qulqulka gaaska iyo qoyaanka, xawaaraha sarrifka degdegga ah. Guryuhu waxay ka horjoogsanayaan biyaha inay ku dhacaan jirka dareeraha oo ay waxyeeleeyaan dareeraha, laakiin waxay u oggolaaneysaa hawo inay u gudubto ujeeddada laga leeyahay cabbirka qoyaanka jawiga (huurka). Baaxadda cabbirka godadka: 0.2um-120um, shaandhayn aan siigaysnayn, waxtarka dhexda u wanaagsan, waxtarka sare ee sifeynta. Cabirka daloolada, heerka socodka ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo baahiyaha; qaab-dhismeed deggan, isku-xidhka walxaha is-haysta, hijro la'aan, ku dhowaad aan lakala sooci karin deegaanka adag.
Su'aalaha ku saabsan badeecadaheena ama liiska qiimaha, fadlan noogu soo dir emaylkaaga annagana waan la soo xiriiri doonnaa 24 saacadood gudahood.
Xuquuqda daabacaadda - 2001-3030: HENGKO.com Dhammaan Xuquuqda Aad Leedahay. Hot Products - Sitemap - amp Mobile
daadata birta , Ahama Steel Filter, Uumi sensor , Filter Sintered , Gas qalabka Housing , Sparger